Tigraay Keessaa Sochiin Gargaarsa Namoomaa Danqamuun Itti Fufe: Tokkummaa Mootummootaa
Faayilii - Namoota qarqaarsa fudhachuuf hiriiran, Shiree, Bitootessa 15, 2021
Hojjettoonni gargaarsa namoomaa kan tokkummaa mootummootaa, Tigraay keessaa sochiin gargaarsa namoomaa dhorkamuu, hojjettoonni gargaarsaa gaaffiif dhaabsisamuu fi hojjettoonni gargaarsaa keellaa sakatta’a waraanaa irratti to’annaa jala ooluun gabaasamuun itti fufeera jechuu dhaan dubbi himaan muummicha barreessaa kan tokkummaa mootummootaa Stephane Dujarric ibsaniiru. Qabeenyaa gargaarsa namoomaa saamuu fi qabuun qaamotii walitti bu’iinsa sana keessajiraniin geggeessamuu illaa gabaasaniiru.
Tigraay bakka hedduu seenuun hin danda’amu. Naannoo seenuun danda’amu keessa immoo caasaan bishaanii kan hin hojjennee fi keellaaleen eegumsa fayyaa murtaa’aa ykn qaruma kan hin jirre ta’uu dabalatee haalli isaa hamaa dha jedhan.
Wabiin nyaataa dhabamuun sadarkaa yaaddessaa irra jira. Gabaasaan duraanii kan Axum fi godinaa walakkeessa Adwaa akka ibsutti, namoota biyya ofii keessatti qe’ee irraa buqqa’an irratti mallattoo beelaa mul’ataatu jira jedhaniiru. Hawaasa Kaaba Tigraay keessaa erga oomishini gubatee ykn saamamee as hojjettoonni gargaarsaa gargaarsi nyaataa akkaan kan barbaachisu ta’uu tuqaniiru. Namoonni oomisha ennaa gubanii fi saaman tilmaamuun rakkisaa dha jedhan.
Michoonni keenya kan gargaarsaa, odeeffannoo kanneen qe’ee ofii irraa buqa’an gara qe’ee isaaniitti akka deebi’an kan mootummaan ajaje yaaddessaa ta’uu akeekkachiisaniiru jedhan.
Rakkooleen jiraatan iyyuu, michoonni gargaarsa namoomaa hamma danda’ame deebii gargaarsaa kennuu itti fufaniiru. Torban darbe qofaa uummata 560,000 oliif deggersa kan godhan yoo ta’u, kunis lakkoobsa namoota erga xumura baatii Bitootessaa qabee gargaarsa argatanii gara miliyoona 3.3tti ol guddisee jira.
Kan karoorfamee jiru uummata miliyoona 5.2 dhaqqabuuf yoo ta’u, amma iyyuu uummata hedduu dhaqqabuu qabna jedhan.
Namoota rakkoo keessa jiran mara gargaaruu akkasumas gargaarsa namoomaa jiru babal’isuuf, danqaan akka hin jiraanne waamicha gochuu itti fufna. Hojii kanaafis deggersa maallaqaa itti dabalaa hatattamaan barbaachisa jedha ibsi dubbi himaa tokkummaa mootummootaa biraa kenname kun.
Gama biraan hooggantuun dhaaba gargaarsa misoma addunyaa Yunaayitid Isteetis /USAID Samaanta power kaleessa ergaa tweeter irratti maxxansaniin, “Mormiin wal ta’iinsa gaafata”. Jeeqamni Tigraay keessaa akka dhaabatuu fi gargaarsi uummata akkaan isa barbaachisu akka dhaqqabuuf mootummaa Itiyoopiyaaf sagalee tokkoon waamicha dabarsuu danda’uu keenya barbaachisummaa isaa daran mul’isuuf ministeerota biyyoota michoota ta’an waliin mari’adheen jira jedhan.